Angel Cottage, Boxgrove-Relax & Unwind
Beka ngaphakathi kweGoodwood Estate kunye nokuhamba imizuzu engama-20 kuphela ukuya kwiHotele yaseGoodwood, eneendawo ezimbini zegalufa, iAngel Cottage inamagumbi amabini okulala amabini kunye negumbi lokuhlambela kumgangatho wokuqala, zombini zineeTV. Igumbi lokulala elisezantsi linegumbi elimanzi le-en-suite kunye nokufikelela kwigumbi eliluncedo, elinomatshini wokuhlamba kunye ne-tumble dryer. I-cottage ihonjiswe ngobumnandi kwaye yafakwa kunye negumbi lokuphumla eline-Sky HD kunye neNetflix, kunye ne-fiber broadband.
I-cottage iyinja enobuhlobo kunye negadi evaliweyo kwaye izinja ezi-2 zamkelekile ukuba zihlale simahla. Sineendawo zokupaka ezi-2 ngasemva, kunye negumbi lolondolozo elithandekayo elijongene nepatio yangasemva kunye negadi. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, ithosta ephindwe kabini/iketile kunye nomatshini wekofu weNespresso. Ivenkile yelali ingaphaya kwendlela, ithengisa iintlobo ngeentlobo zokutya okutsha kunye nezibonelelo. Ukukhetha ukutya okuziinkozo kwisidlo sakusasa, ubisi, ibhotolo, iti, ikofu, ii-Nespresso pods kunye neswekile zishiywe ekhitshini ukuze kube lula kuwe. Indlu yasekhaya yayakhiwe malunga ne-1850 yabasebenzi beGoodwood Estate kwaye ngoku iye yahlaziywa ngovelwano, yandiswa kwaye yafakwa ukwenza oko sinethemba lokuba uya kuvuma ukuba yindawo ethandekayo yokuphumla kwaye uchithe iintsuku ezimbalwa ujonga le ndawo.
40" TV ene-I-Netflix, intambo yepremiyamu, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Singqongwe yimithi kunye namaphandle ukuze sihambe kakuhle. Umnyango olandelayo yiBoxgrove Priory, ibhodlo lakudala ngoku kwaye iTinwood Vineyard ivelisa iwayini ezimnandi zesiNgesi, kunye nokhenketho olukhokelwayo kumgama ozimayile kuphela. Iziko ledolophu yaseChichester, iilwandle ezinkulu ezinje ngeWest Wittering kwaye ngokuqinisekileyo iGoodwood Estate enomdyarho weemoto, umdyarho wamahashe, iikhosi zegalufa kunye neendawo zokutyela zifikeleleka lula. I-Pagham Harbour ekufutshane yindawo yokugcina indalo ezukileyo nenoxolo kwaye yenye yeendawo ezimbalwa ezingaphuhliswanga zonxweme lwaseSussex. Eli chweba likhuselweyo lisiza esinemigxobhozo esibalulekileyo kwihlabathi kwizilwanyana zasendle. Sikwanayo nevenkile entle yelali kwangoko ngaphaya kwendlela, ibonelela ngezinto ezintsha zalapha ekhaya kunye namaphephandaba.
Sihlala imizuzu eyi-10 ukusuka kwi-cottage kwaye sihlala sifumaneka ukuba unemibuzo malunga neenkonzo zendlu. Izitshixo ziyakushiyelwa kwibhokisi ekhuselekileyo xa ufika.